Chivabvu 19, 2018 arun
Coincheck anotsvaka mvumo kubva Japanese regulators & anoronga US kuwedzera
Pasina mwedzi mina pashure pokurasikirwa isati yamboitwa $500 mamiriyoni cryptocurrency kuti hackers, Japanese cryptocurrency Exchange Coincheck anorongera kwakatangazve kwayo.
Under utungamiri itsva pashure moto kutengeswa kune brokerage Monex Inc., Coincheck yave kushandisa zvakanyanya kuvandudza kuchengeteka uye kudzorera chivimbo pakati vatengi vanenge akarega kanenge $540 mamiriyoni pekufa Hack. Mubvunzurudzo, Monex Chief Executive Officer Oki Matsumoto akati anotarisira exchange kuwana yepamutemo rezinesi muJapan mwedzi unotevera. Ari kurongawo kuunza Coincheck kuti kuchikuva kuti America.
Matsumoto akati "Tinogona kungozvinyengeterera yedu mutengi chawo pa Coincheck.”